Nhau - Iko kuita uye zvakanakira PE epurasitiki chubhu kurongedza
Furo pombi bhodhoro
Mafuta pombi bhodhoro
Screw pane chivharo bhodhoro
Yakanaka mhute sprayer
Bamboo kana huni chipunu
Tenderera pane bhodhoro
Bhodhoro risina mweya
Tube girazi bhodhoro
Chakakosha mafuta bhodhoro
Laser achiita zvokutemera
Iko kuita uye zvakanakira PE epurasitiki chubhu kurongedza
Iko kuita uye zvakanakira Pe epurasitiki chubhu kavha
Iko kuita uye zvakanakira Pe epurasitiki chubhu kavha: mutete wepamusoro kuumbwa, kuonda kwepamusoro kunyorera, kufukidza mapepa, kuwanda kwemukati kupopera, kudhinda kwemavara uye humwe hunyanzvi. Pe epurasitiki yekuzora chubhu kurongedza zvigadzirwa zvekambani 0ur Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.. have
Iyo yakachengeteka, ine hutsanana, isina ngura, inoratidzika nechitarisiko, iri nyore kushandisa, uye inochengetedza zvakatipoteredza. Pe epurasitiki chubhu kurongedza kunoshandiswa zvakanyanya mukurapa, zvizoro, kemikari yezuva nezuva, chikafu nemamwe maindasitiri.
Kune akawanda marudzi ePE epurasitiki chubhu kurongedza, kunyanya vakadzi zvizoro. Nemakwikwi ari kuramba achityisa mumusika we cosmetics, makambani akasiyana siyana ekuzora uye makambani ekuzora ari kuyedza kuwedzera kutengesa kwezvigadzirwa zvavo.
Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. yaedza kwazvo kurongedza uye kusimudzira zvigadzirwa.
Mabasa uye mashandiro e Pe epurasitiki chubhukurongedza kuri kuramba kuchinyatso kunatswa, uye kune akawanda uye akazara-akazara ma cosmetics, mutsauko mumakisi uri pachena, uye mafomu ekuputira ari kupenya; panguva imwechete, kuitira kuti uzvishambadze zvirinani
Kune avo zvigadzirwa, RB PACKAGE inoronga uye kurongedza zvipfeko zvakasiyana kuti zvienderane shanghai muraraungu package hunhu hwake.
Pe epurasitiki chubhu kurongedza ine mazita mazhinji uye akasiyana mabasa, asi zvinoenderana nechimiro chayo uye kuputira kuchinjika, pane anonyanya anotevera anotevera zvikamu: solid cosmetics, solid particle (powder) cosmetics, liquid uye lotion Cosmetics, cream cream, nezvimwe.
1. PE epurasitiki chubhu kurongedza inobvisa chikamu chemhepo (oxygen) muchirongo chekupakira, icho chinogona kudzivirira zvakanyanya kuora kwechikafu.
2. Pe epurasitiki chubhu kurongedza inoshandisa kuputira zvinhu zvine yakanakisa chipinganidzo zvivakwa (kumesa mweya), yekuisa chisimbiso tekinoroji uye zvinyoro zvinodiwa, izvo zvinokwanisa kudzivirira zvinobudirira kuchinjaniswa kwezvinhu mupakeji uye kudzivirira chikafu chekurema
Disharmony kuravira kurasikirwa uye kudzivirira kwechipiri kusvibiswa.
3. Iyo gasi iri muPE epurasitiki chubhu yekurongedza mudziyo yakaburitswa, iyo inowedzera kupisa kupisa, inogona kuvandudza kushanda kweye kupisa kupisa, uye kudzivirira kuwedzera kwegasi panguva yekupisa yekudzivirira kuita kuti chigadziko chekupakisha chiputse
Muindasitiri yezvikafu, PE epurasitiki chubhukurongedza kunoshandiswa zvakanyanya, senge huku makumbo, ham, sausage, nezvimwe. zvizorwa hoses zviri kuwedzera kushandiswa mumakeke, zvigadzirwa zvesoya, michero yakachengetedzwa uye zvimwe zvigadzirwa zvakachekwa. Pe epurasitiki. Hupenyu hwesherufu hwechikafu muhose hosi kurongedza kunowedzera pasherufu hupenyu hwechikafu.
Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. ndiye mugadziri, murarabungu pasuru Ipai imwechete-yekumira yekuzora yekupaka.
Kana uchida zvigadzirwa zvedu, unogona kutibata,
Post nguva: Jul-28-2021
Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd, Kuti ubvunze nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichava nekutaurirana mukati maawa makumi maviri nemana.
Runhare:Kuvaka 4, Kwete 1008, kumabvazuva kweJiefang Rd, Fengxian District, Shanghai City, China
© Copyright - 2010-2021: Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.